Golaha wakiillada Puntland oo fasax kooban galay – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland oo fasax kooban galay
Golaha wakiillada Puntland oo maanta meelmariyay qaabka loo ansixin doona xukuumadda ayaa fasax kooban galay inta la hor keenayo golaha wasiiradda cusub ee la sugayo in la magcaabo.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland mudane Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo-daareed) ayaa sheegay in aysan jirin shaqo kale oo miiska u saaran golaha inta laga horkeenayo golaha wasiirada, sidaas la adligeedna ay fasax ahaan doonaan.
Kalfadhigii 43aad ayaa goluhu weli ku gudajiraa.
Wakiilladu waxay maanta meelmariyeen in xukuumada loo ansixiyo si wadar ah, waxaase meesha ku jirta in wasiir walba uu golaha ka hor sheegi doono taariikh nololeedkiisa iyo inuu leeyahay baaxad ku filan shaqada loo igmaday, si goluhu u hubiyo shuruudaha dastuurku qorayo ee wasiirka laga rabo.
Wasiirka Deegaanka Somaliland oo ku faraxsan in ay leedahay Baarlamaan la xisaabtama
Xukumadda Soomaaliya oo sheegtay in ay hubiso hantida qofka ay shaqaaleysiineyso